အလှမယ်အဖြစ်ရပ်တည်မယ်ဆိုတဲ့ငြိမ်းမြတ်သူကို နာမည်ကြီးနေတာတ စ် ခု ထဲနဲ့အလှမယ်လို့ခေါင်းစဉ်မတပ်ဖို့ ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့အလှမယ်အေးငြိမ်းဆွေ – XB Media Myanmar
CeleConnectionsပရိသတ်ကြီးရေ အေးငြိမ်းဆွေကတော့ Miss Myanmar Internat-ional ( 2015 ) ရဲ့ သရဖူကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ Miss တစ်ယောက် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန် မှာတော့Showပွဲတွေ သိပ်မလျှောက်ပေမယ့် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတော့ သူမရဲ့ ပရိသ တ်ေ တွနဲ့အမြဲထိတွေ့လျက်ရှိသူတစ်ယောက်ပါ။
TikTok celeတစ်ယောက်အနေနဲ့ အလှမယ်အဖြစ်ရပ်တည်မယ့်အပေါ် အလှမယ်တွေအနေနဲ့ သူမတို့ရဲ့အမြင်တွေကို ​လတ်တလောမှာ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပြော​​ဆိုမှုတွေရှိ လာခဲ့တာပါ။Liveလေးတွေလွှင့်ပြီး သူမရဲ့ပရိသတ်တွေကိုအလှအပရေးရာဆိုင်ရာေ တွဝေမျှ လျက်ရှိတဲ့ အလှမယ်အေးငြိမ်းဆွေကတော့ဒီနေ့မှာ ” “အလှမယ်” ဆိုတဲ့ ကိုယ်အင်မတန် တန် ဖိုးထားရသော၊ ဂုဏ်ယူမြတ်နိုးမဆုံးဖြစ်ခဲ့ရသောအရာဟာ ဒီလောက်ထိတန်ဖိုးလျော့ကျသွား တာ လား? တခါမှ Facebook Cele၊ Tiktok Cele တွေကို မဝေဖန်ခဲ့ မတိုက်ခိုက်ခဲ့ဘူးပါ…. မနာလိုဖို့လည်း အဝေးကြီးပါ။
ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့ ကိုယ်တန်ဖိုးထားရသောအရာကို ထိခိုက်လာလို့ ရင်ထဲတော်တော် မကောင်းလို့ ပြောမိတာပါ။“အလှမယ်” ဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကိုသတ်မှတ်သ လဲ?အလှတ စ်ခုထဲလား? ဉာဏ်ပညာတစ်ခုထဲလား?စိတ်ထားမြင့်မြတ်ရင့်ကျက်တာ တစ်ခုထဲလား ?ပေါင်း သင်းဆက်ဆံရေးကောင်းပြီး personality ထူးခြားတာတစ်ခုထဲလား?
သူနေထိုင်ရာဘဝမှာ အစွန်းထင်းမရှိအောင် စောင့်စည်းနေထိုင်တာတစ်ခုထဲလား? မဟုတ် ဘူး….အဲ့ဒါတွေအကုန်ပေါင်းမှ “အလှမယ်” ဆိုတာ ဖြစ်လာတာပါနော်။တွေ့ရာလူကို နာမည် ကြီးနေတာတစ်ခုထဲနဲ့၊ စိတ်ထားလေးရိုးသားလို့ပါဆိုတာတစ်ခုထဲနဲ့တော့ “အလှမယ်” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ကို လွယ်လွယ်လေးဆွဲမထည့်ပါနဲ့ရှင်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ”ဆိုပြီး အလှမယ် အေ နနဲ့ ရပ်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုတဲ့ ငြိမ်းမြတ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူမအမြင်ကိြုေ ပာပြခဲ့တာပါ။CeleConnectionsပရိသတ်ကြီးလည်း အေးငြိမ်းဆွေနဲ့အမြင်တူရင်မှတ်ချက် တစ် ခုခုပေးခဲ့ပါဦးနော်။
Source: Aye Nyein Swe
CeleConnectionsပရိသတျကွီးရေ အေးငွိမျးဆှကေတော့ Miss Myanmar Internat-ional ( 2015 ) ရဲ့ သရဖူကို ရရှိပိုငျဆိုငျခဲ့တဲ့ Miss တဈယောကျ ပဲ ဖွဈပါတယျ။ အခုခြိနျ မှာတော့Showပှဲတှေ သိပျမလြှောကျပမေယျ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာတော့ သူမရဲ့ ပရိသ တျေ တှနဲ့အမွဲထိတှလေ့ကျြရှိသူတဈယောကျပါ။
TikTok celeတဈယောကျအနနေဲ့ အလှမယျအဖွဈရပျတညျမယျ့အပျေါ အလှမယျတှေ အနနေဲ့ သူမတို့ရဲ့အမွငျတှကေို ​လတျတလောမှာ တိုကျရိုကျဖွဈစသှေယျဝိုကျ၍ဖွဈစေ ပွော​​ဆိုမှုတှရှေိ လာခဲ့တာပါ။Liveလေးတှလှေငျ့ပွီး သူမရဲ့ပရိသတျတှကေိုအလှအပ ရေးရာ ဆိုငျရာေ တှဝမြှေ လကျြရှိတဲ့ အလှမယျအေးငွိမျးဆှကေတော့ဒီနမှေ့ာ ” “အလှမယျ” ဆိုတဲ့ ကိုယျအငျမတနျ တနျ ဖိုးထားရသော၊ ဂုဏျယူမွတျနိုးမဆုံးဖွဈခဲ့ရသောအရာဟာ ဒီလောကျထိတနျဖိုးလြော့ကသြှား တာ လား? တခါမှ Facebook Cele၊ Tiktok Cele တှေ ကို မဝဖေနျခဲ့ မတိုကျခိုကျခဲ့ဘူးပါ…. မနာလိုဖို့လညျး အဝေးကွီးပါ။
ဒါပမေယျ့ ဒီတဈခါတော့ ကိုယျတနျဖိုးထားရသောအရာကို ထိခိုကျလာလို့ ရငျထဲတျောတျော မကောငျးလို့ ပွောမိတာပါ။“အလှမယျ” ဆိုတာ ဘယျလိုလူမြိုးတှကေိုသတျမှတျသ လဲ? အလှတ ဈခုထဲလား? ဉာဏျပညာတဈခုထဲလား?စိတျထားမွငျ့မွတျရငျ့ကကျြတာ တဈခုထဲ လား ?ပေါငျး သငျးဆကျဆံရေးကောငျးပွီး personality ထူးခွားတာတဈခုထဲလား?
သူနထေိုငျရာဘဝမှာ အစှနျးထငျးမရှိအောငျ စောငျ့စညျးနထေိုငျတာတဈခုထဲလား? မဟုတျ ဘူး… .အဲ့ဒါတှအေကုနျပေါငျးမှ “အလှမယျ” ဆိုတာ ဖွဈလာတာပါနျော။တှရေ့ာ လူကို နာမညျ ကွီးနတောတဈခုထဲနဲ့၊ စိတျထားလေးရိုးသားလို့ပါဆိုတာတဈခုထဲနဲ့တော့ “အ လှ မယျ” ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျအောကျကို လှယျလှယျလေးဆှဲမထညျ့ပါနဲ့ရှငျမတ်ေတာရပျခံပါ တယျ ”ဆိုပွီး အလှမယျ အေ နနဲ့ ရပျတညျနိုငျအောငျကွိုးစားသှားမယျဆိုတဲ့ ငွိမျးမွတျသူ နဲ့ပတျသကျပွီး သူမအမွငျကိွုေ ပာပွခဲ့တာပါ။CeleConnectionsပရိသတျကွီးလညျး အေးငွိမျး ဆှနေဲ့အမွငျတူရငျမှတျခကျြ တဈ ခုခုပေးခဲ့ပါဦးနျော။
လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၄)နှစ်က ပရိသတ်တွေ ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့ ခင်ပက်ပက်စက်စက် တိုးနဲ့ ပြန်လည်မိတ်ဆက်ပေးလာတဲ့ နေတိုး